4 ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ igwe eletriki igwe eletrik | ebike Shuangye
Mbido blog News 4 ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ igwe eletriki ugboala
Datebọchị ： 2020-07-29 Categories ：News Nlele ： 2,423
Ugbu a kwa, elekota igwe eletrik ọkachasị nke ukwuu maka ibubata ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ na ahụike. Nke a bụ otu n'ime ụzọ njem kwesịrị ekwesị n'oge COVID-19. Ọtụtụ mmadụ na-etinye igwe kwụ otu ebe na ọkụ eletrik na-arịwanye elu iji hụ na njem ha kwa ụbọchị. Ndị a bụ ihe ise mere ndị mmadụ ji ahọrọ ịhọrọ igwe kwụ otu ebe na-apụ eletriki dị ka isi ma ọ bụ njem nke abụọ.
Gba ọsọ Ngwa
Egwuregwu eletrik na-eme ka ị gaa ebe ahụ ngwa ngwa, nke a nwere ike bụrụ ihe dị mkpa na njem gị ebe ebumnuche ka ga-arụ ọrụ n'oge. N'ihi na igwe eletrik na-aga ngwa ngwa karịa igwe eji agba. Mgbe etinyere moto na igwe eletrik na obodo, ọ nwere ike inyere ndị na-agba ịnyịnya ígwè aka ọsọ ọsọ nke 25-ruo-30 kilomita kwa awa. Iji maa atụ, ọ bụrụ na njem dị kilomita asatọ kwa ụbọchị, nkezi ọsọ maka ịnyịnya ígwè a na-emebu nke ihe dịka kilomita 8 n'otu awa, ọ ga-ewe nkeji 15 iji gbaa; ma igwe eletriki igwe eletrik na-eji 27 kilomita kwa elekere ma enyemaka ma ọ bụ ike ele, naanị minit 25 na igwe eletrik. N'ihi na igwe eletrik dị mfe ịnya. A pedal aka usoro proportionally agbakwụnye ike ọ bụla ọrịa strok, otú i nwere ike nọkwasị n'ihu karịa ị nwere ike na a ot bike maka otu ego nke mmadụ mgbalị.
Gba ịnyịnya ígwè eletrik na-aga ịrụ ọrụ nwere ike ịdị ọnụ ala karịa ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ ịnara njem ọhaneze. Iji maa atụ, nsogbu kasịnụ ịkwọ ụgbọala na-aga n'ọtụtụ obodo bụ na ị nwere ike ịkwụ nnukwu ego naanị ịchebe ụgbọ ala gị. Ma na-adọba ụgbọala a igwe kwụ otu ebe bụ n'efu. Na-esote, ọnụahịa mmanụ ụgbọala bụkwa nsogbu. Na-enweghị ngụkọ ọ bụla, oriri gas nke dollar ga-adị ngwa ngwa karịa ọkụ eletrik dollar. Ego ole ka nke ahụ ga-efu n'etiti ụgbọ ala na ebike? Ikekwe ego ụgbọ ala ji ihe karịrị okpukpu iri karịa nke igwe eletrik n'otu ọnwa.
Ahụike ka mma
Idinggbanye igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ na-eme ka ị nọgide na-arụ ọrụ ma nwee ike ịnwe uru ahụike dị ukwuu gụnyere igbochi ọrịa obi, kansa. N’ezie, anyịnya igwe dị mfe (nke na-anaghị esicha ike) ịnya karịrị nke igwe ọdịnala, ha ka na-akwalite mmega ahụ, ọkachasị ma e jiri ya na ịnya ụgbọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala. Ihe bụ ihe ọzọ, mgbakwunye na enyemaka pedal nwere ike ime ka ndị na-ebugharị ụgbọ ala nwee ike ịnya igwe kwụsịrị arụ ọrụ kama ịkwọ ụgbọala. Yabụ inyeaka igwe elele elele elele elele elele dị oke mma maka ndị kwuru na ha enweghị oge iji kwado mgbatị ahụ ma ọ bụ na ha erughị eru ịme mmega ahụ.
Gbaa Ọfe na-adịghị
Ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ígwè n'oge ọkọchị mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ogo Celsius 33, ị ga-agba ọsụsọ. Ya mere, nke a - na igwe eletriki igwe eletrik na-enye njem na-enweghị ọsụsọ n'okpuru ọnọdụ eletrik dị ọcha. Karịsịa, ndị na-agagharị agagharị na-achọ ịkwadebe uwe ọzọ mgbe niile iji dochie anya iji mee ka ha dị mma, dị ọcha, na ọkachamara na-arụ ọrụ, na igwe igwe na-esikarị ike igbo mkpa ha. Na igwe eletrik na-eme ka ụkwụ abụọ na-aga n'okporo ụzọ nwere ike ịba uru maka ọtụtụ ndị mmadụ, na-ahapụ ndị na-agba ịnyịnya ịnụ ụtọ elele niile nke ịnyagharị igwe ma na-ewepụ ọtụtụ nsogbu ya kacha njọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu ihe gbasara igwe kwụ otu ebe na eletrik, ị nwere ike ịchọgharị edemede ndị gara aga ma ọ bụ gaa na Weebụsaịtị anyị, nwekwara ike ịhapụ ozi gị n’okpuru.
Tags:igwe kwụ otu ebe igwe elektrik
Mbụ: Egwuregwu 3 E Na-ewu ewu Maka Ere - Na-egbo Mkpa Gị
Next: Kedu ihe bụ ụgbọ ala eletriki kachasị mma n'okpuru $ 1000
Tụnyere: Electric commuter bike VS ọgba tum tum
Igwe ọkụ eletriki igwe ọkụ eletriki VS: nke dabara adaba maka ịga njem